ဆရာမြနှင့်သူ၏ချစ်သူများ – Grab Love Story
ခင်လေးနှင့်ဇင်ဇင် အိမ်ပြန်ရောက်ပီးနောက်လွန်စွာပျော်ရွှင်နေကြသည်… ..ခင်လေးမှာ အမေဖြစ်သူကို သူရရှိခဲ့သောအောင်လက်မှတ်နှင့်ရိုက်ထားခဲ့သောပုံများပြသလေသည်.. ဒေါ်ခင်မမ..မျက်ရည်များကျရင်.သူမသမီးကို ဖက်လိုက်ကာ… “သမီးလေးတော်လိုက်တာ အမေမွေးရကြိုးနပ်တယ် ဟင့်”. . ထို့နောက် ခင်လေးရဲ့ဖုန်းမှ ပုံများကိုယူကြည့်ရာတွင်…. “ဟင်….”ဒေါ်ခင်မမ..လက်များပင်တုန်နေသည်… “အမေ ဘာဖစ်တာလဲ..”. . “ဒါ ဘယ်သူလဲသမီး”. .. ခင်လေးနှင့်ဇင်ဇင်နှစ်ယောက်ကြား ဆရာမြင့်ကိုမေးလေသည်.. “သမီးတို့ဆရာပါ အမေသိလို့လာ”. . “သိပါဘူး..ငယ်ငယ်လေးမိုအံသြတာပါ”. …သားမိနှစ်ယောက်အိပ်ယာဝင်ကြသည်. သမီးဖြစ်သူ၏ဖွံထွားကာစ ကိုယ်လုံးလေးနှင့်ချစ်စရာကောင်းသော မျက်နှာလေးက ခင်မမငယ်စဉ်ကလို.. ချောမောလှပလှလေသည်….. ….. အခန်း၃… …ခင်လေးနှင့်ဇင်ဇင်တို့စင်ကာပူမှာကျောင်းတတ်ရမည်ဖြစ်သည်…
ဆရာမြက အားလုံးအကုန်ကျခံပီး… မအိက အားလုံးစီစဉ်ပေးရလေသည်… ဆရာမြကိုယ်တိုင်စင်ကာပူထိလိုက်ပို့မည်ဖြစ်၍..ခင်လေးတို့ပျော်နေကြပါသည်.. ..ဇင်ဇင်၏မိဘများက လေဆိပ်လိုက်ပို့သော်လည်း..ခင်လေးအမေလိုက်မလာပါ.. ..နှစ်နာရီလောက်ကြာခရီးစဉ်ဖြစ်၍. ဆရာမြအတွက်မထူးဆန်းပေမဲ့… ခင်လေးနှင့်ဇင်ဇင် ရင်ခုန်နေရသည်… သုံးယောက်တွဲခုံဖြစ်သည်… ခင်လေးက ပြတင်းမှန်ဘက်ထိုင်၍ဇင်ဇင်ကအလည်မှာ..ဆရာမြက ဘေးမှာ… လေယာဉ် စပျံသန်းချိန် ငြိမ့်ခနဲလှုပ်သွားသဖြင့်..ဇင်ဇင်ကလန့်ပီး ဆရာမြရဲ့လက်လာကိုင်လေသည်… ကိုမြ သူမလက်ကလေးကိုပြန်အုပ်ကိုင်လိုက်ပီး “မကြောက်နဲ့နော်သမီး..အစမို့လို့ပါ..ဟုဆိုကာ လက်ဖမိုးလေးကိုပွတ်ပေးနေသည်..
ခင်လေး အပြင်ကို ကြည့်နေရာမှ.. ဇင်ဇင့်ဘက်လှည့်လာရာ…ထိုမြင်ကွင်းကိုတွေ့၍.. စိတ်ထဲမနာလိုဖြစ်နေသည်… ညီအမလိုချစ်ပေမဲ့ ဒါမျိုးတော့သူလဲမမြင်ချင်ပါ.. “ဇင်လေး..ဒီဘက်လာထိုင်ဟာ..ငါခေါင်းမူးလို့”. ..သူတို့နှစ်ယောက်နေရာလဲလိုက်သည်.. ခင်လေးတကယ်လေယာဉ်မူးနေပါသည်. အန်ချင်သလိုဖြစ်၍ ပလက်စတစ်အိပ်ကိုယူပီးအန်လေသည်. ကိုမြ သူမရဲ့ကြောလေးနှင့် ခေါင်းလေးကိုပွတ်သပ်ပေးပီး.. “အဆင်ပြေလားသမီး ဆရာ့ပုခုံးမှာမှီနေလိုက်”. .. သူမ အလိုက်သင့်လေးမှီလာသည်…. ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ ခင်လေးရယ်.. သူမနှဖူးလေးကို မှုတ်ပေးလိုက်သည်… သူမမျက်စိတချက်ဖွင့်ပီးပြန်ပိတ်ကာမှိန်းနေလေသည်… ဇင်ဇင်..မူးလာပါပီ ထို့ကြောင့်ပြတင်းပေါက်ဘောင်ကိုမှီ၍.. မျက်စိပိတ်ထားလေသည်…
ကိုမြစိတ်တွေ ပရမ်းပတာဖြစ်နေသည်.. ပခုံးအထက်မှေးနေသောခင်လေးရဲ့ပါးကို နမ်းလိုက်လေသည်…. သူမ ငြိမ်ခံသည်…နှုတ်ခမ်းလေးကို တချက် ကစ်ပေးလိုက်သည်… မျက်နှာမှာပန်းရောင်သန်းလာပီး… ညာဘက်လက်က ကိုမြပေါင်ကို ညစ်လာလေသည်… ခင်လေး စိတ်ပါလာပီဆိုတာသိလိုက်သည်… ဘေးလူများရှိ၍..ဘာမှလုပ်လို့မရပေ… ပြန်ငြိမ်နေလိုက်သည်… ထိုစဉ် ဇင်လေး ထလာပီး… “ကျမ အိမ်သာသွားချင်တယ်ဆရာ”. . “အေး သွားလေ ဒီဘက်မှာ”. .. သူမ မျက်နှာမကောင်းပါ အန်ချင်နေပုံရသည်…. ဇင်ဇင်..ခုဏကအဖြစ်ကိုမြင်ပါသည်… စိတ်ထဲမကောင်းပေ..ခင်လေးက..ဆရာ့ကို ကြိုက်နေတာသိသည်… သူမလည်းကြိုက်သည်… ဆရာက ခင်လေးနဲ့ကြိုက်ရင် သူမရင်ကွဲပေမည်..ထို့ကြောင့်အိမ်သာမှာသွားငိုမည်ဟု ဆုံးဖြတ်လေသည်.. …..
ဇင်လေးထွက်သွားသောအခါ… ဆရာမြ မှာ ဂွင်တဲ့လေသည်..ခင်လေးရဲ့မျက်နှာလေးကို ကိုင်လိုက်ပီး..နှုတ်ခမ်းရဲရဲလေးကိုကစ်ပေးပြန်သည်… “ခင်လေး..ဆရာ့ကို ကြိုက်နေတယ်မဟုတ်လား”. .. “ဟို..မသိဘူးလေ.သမီး..မပြောတတ်ဘူး” ..သူမ မျက်လုံးပိတ်၍ပြန်မှေးလေသည်. ဇင်လေး..အိမ်သာသွားတာ ၁၅ မိနစ်လောက်ရှပီ..ပြန်မလာပေ.. ဆရာမြစိတ်ပူသွားသည်… “ဆရာ အိမ်သာခဏသွားမယ် ခင်လေး” ဟုဆိုကာထသွားလေသည်… “ဇင်လေး..အဆင်ပြေလား..ဘာဖြစ်လို့လဲ” ..ဆရာမြ အသံကြောင့် ဇင်လေးအငိုရပ်ပီး.. “ပြေတယ်ဆရာ ပီးပီဟုဆိုကာထွက်လာလေသည်.”. . လေယာဉ်မယ် တဦးက မမြင်သလိုဟန်ဆောင်ပီး..ထွက်သွားလေသည်… “ဇင်လေး ငိုနေတာလား.မျက်လုံးရဲနေတယ်”. . အိမ်သာအဝလမ်းကျဉ်းကျဉ်းလေးမှာ ဆိုတော့ လူခြင်းကပ်နေသည်…
“ဆရာ ခင်လေးနဲ့ကြိုက်နေတာလားဟင်” ကိုမြ သိလိုက်ပီ..သူမလည်း င့ကိုကြိုက်နေတာပဲ ဟုတွေးမိလေသည်. ဂျပန်မလေးလို ချစ်ဖို့ကောင်းသောသူမကိုဖက်လိုက်ပီး.. ပါးကိုလျက်တပျက်နမ်းလိုက်၏… “ဆရာ အပေါ့သွားအုံးမယ်..ပြန်သွားထိုင်တော့”. ..အနမ်းခံရသောသူမ.ရင်တွေခုန်သွားသည်… “ဟုတ်”. ……. သုံးယောက်သားအတွေးများနှင့်စင်ကာပူရောက်ခဲ့လေသည်….. လေဆိပ်တွင် တရုတ်မခပ်လန်းလန်းတယောက်လာကြိုလေသည်..
နာမည်မှာ မစ်လီ ဖြစ်သည်… “သမီးတို့ သူကမစ်လီ..ဆရာ့သငယ်ချင်းပေါ့.. သူနဲ့အတူနေရမှာ..”. . မစ်လီသည်တရုတ်သိုင်းကားသိန်းငှက်သူရဲကောင်းကားမှ ဂူဂူးနှင့်တူလေသည်.. စကာပူသူဖြစ်၍.လွတ်လပ်ပုံရသည်… ဘောင်းဘီပေါင်တိုလေးဝတ်ထား၍.. ဖွေးဥနေသော..ပေါင်သားကိုမြင်ရသည်… အင်းကျီးဂျိုင်းပြတ်ကြောင့် ဂျိုင်းသားဖွေးဖွေးနှင့်ရင်သားအကစ်လေးပါတွေ့ရသည်… မျက်နှာချိုချိုချစ်စရာလေးနှင့်သူမက.. ခင်လေးနှင့်ဇင်လေးကိုနှုတ်ဆက်သည်.. ထို့နောက် ဆရာမြလက်မောင်းကိုကိုင်ပီး “မြ..မလာတာကြာပီနော်ဒီကမစ်နေတာ ခုမှတွေ့ရတော့တယ်.”ဟုဆိုလေသည်. …. သူတို့အားလုံး မစ်လီခေါ်ဆောင်ရာတိုက်ခန်းသို့ ရောက်လာကြသည်.. မစ်လီမှာတယောက်ထည်းနေလေသည်. “ဟေး ဘေဘီတို့ ဟိုအခန်းမှာနေကြ.. လိုတာရှိရင်ပြော”ဟုဆိုကာ.. နှစ်ယောက်နေအခန်းကျယ်ကိုပေးလေသည်… ခင်လေးတို့သင်တန်းမှာသတင်းကြားဖူးသည်..ဆရာမြ စလုံးမှာ တိုက်ခန်းပိုင်ရှိသည် ဟူ၍ဖြစ်သည်… သူ့တိုက်ဖြစ်ရမည်ဟု တွေးမိကြသည်… သူမတို့နေထိုင်ရန်ပြင်ဆင်နေစဉ်.. မစ်လီနှင့်ဆရာမြ စကားများပြောကြပီအခန်းတခုထဲဝင်သွားကြသည်..
တရုတ်လိုပြောနေကြ၍ သူမတို့နားမလည်ပါ… …… တဖက်အခန်းထဲမှာတော့… “လီ..တကယ်သတိရတာလား”. . “အင်းပေါ့ကိုရဲ့..ကို့ဟာကြီးကိုပိုသတိရတယ်..ခိခိ.”. . မစ်လီ အဝတ်များချွတ်ကာ ကုတင်ပေါ်တက်လေသည်.. ဆရာမြ အဝတ်ချွတ်၍.. “လီ စုပ်ပေးကွာ”. .. သူမပြုံးလိုက်ပီး လီးရှိရာသို့ ပါးစပ်အပ်လေသည်… ပလွတ်..ပလွတ်…အွင်း… တရုတ်မပါးစပ်သေးသေးလေးထဲလီးက ထွန့်ထွန့်လူးနေသည်.. “လရည်ကြည်များကို အရသာရှိရှိမျိုချလေသည်… “လိုးမီဘေဘီ”. .မစ်လီ ပက်လပ်ပေါင်ကားပေးသည်.. ခရုသားလို နားရွက်ရှိသောစပလေးမှာ တရုတ်မဖြစ်ပေမဲ့မဖြူပါ..အညိုလေးဖြစ်သည်..လီးကြီးနှင့်မမျှအောင်းသေးလွန်းသည်…သို့သော်လည်း လီးမဆံ့သောစပမရှိပါ… ဆရာမြ တဆတ်ဆတ်ခါနေသောလီးကိုတေ့ကိုင်ပီးအပေါ်မှတက်ကြုံးလေသည်…
ဗြိ..ဗြိ..ဗြိ…အား…အ့..အ့….အွင်း…ဖာ့.. ဖာ့…ဆရာမြ ခြေဆင်းထိုင်လေသည်.. မစ်လီ တိုင်ပင်စရာမလိုပဲ… လီးပေါ်တက်ထိုင်ကာ..ဆရာမြဂုတ်ကိုဖက်၍..စောင့်ပါတော့သည်… ဖတ်..ဖတ်..အိ…အွင်း…ရှီး…. သူမရဲ့နို့များကို ဆရာမြက ထပ်မံစုပ်ပေးလေသည်… ရေနွေးတအိုးဆူခံ့အကြာမှာ… နှစ်ယောက်အတူပီးကြလေသည်… တရုတ်မဖြစ်၍..အရေများ.ရွှဲလွန်းသည်. ဆရာမြသုတ်ရေကသိပ်မများပါ… “ဒါလင် အကြာကြီးနေမှာလား”. “တပါတ်ပဲနေမှာ သင်တန်းပြန်စရမယ်လေ”. … …….. ………လိုးပွဲပြီ၍..ရေချိုးကြသည်… မာစတာအခန်းဖြစ်၍..ရေချိုးခန်းပါရှိသည်..ထို့ကြောင့် ရေချိုးပီးအဝတ်သစ်နှင့်အပြင်ထွက်လာသောဆရာမြကို လိုးပီးသားလို့မထင်ရပါ. နုပျိုလန်းဆန်းနေလေသည်… ဧည့်ခန်းဆိုဖာတွင် ခင်လေးတို့ထိုင်နေကြသည်… ချောမောနေသောဆရာမြကိုငေးကြည့်နေကြသည်…
“ကဲ..သမီးတို့ရေ..ကျောင်းအပ်ဖို့ကိစ္စတွေ မစ်လီက အားလုံးစီစဉ်ပေးလိမ့်မယ်.”. . “ဟုတ် ဆရာကဒီမှာနေမှာလားဟင်.”. . “တပါတ်ပဲနေမှာလေ..မင်းတို့သုံးဖို့လည်း ယူထားကြရော့”. .ဟုဆိုကာ… ဘောင်းဘီတွင်းမှ ဒေါ်လာများထုတ်ပေးလေသည်… ……… …ခင်လေးနှင့်ဇင်လေး ဆရာမြကိုချစ်မိနေကြသည်..သူတို့ထားသွားမှာအရမ်းအားငယ်နေကြသည်.. ..”ကဲ ဒီညတော့ နားကြတော့မနက်ဖြန်လျှောက်လည်ပီးဓ့ပုံရိုက်ကြတာပေါ့..” မင်းတို့ မိဘတွေဆီ ဖုန်းဆက်လိုက်ကြလေ..ရောက်ပီလို့”. . …မစ်လီနှင့်ဆရာမြ အပြင်သွားကြပြန်သည်… “ခင်လေး နင်.. လေယာဉ်ပေါ်မှာဘာဖစ်တာလဲ”. . “မူးတာလေဟာ..”. “နင်မညာနဲ့ ငါမေးတာ အဲ့တာမဟုတ်ဘူး ဆရာမြနဲ့နမ်းနေတာလေ”. .. ခင်လေးရှက်သွားလေသည်… “ဟာ.မတော်တဆပါဟ.နင်ရော အိမ်သာမှာ အကြာကြီးလေ ဆရာမြနဲ့ဘာလုပ်နေတာလဲ”. . “ဟ..ဘာလုပ်ရမှာလဲ.လေယာဉ်ပေါ်မှာ”. . “အော်..လေယာဉ်ပေါ်မို့လို့မလုပ်ဘူးပေါ့ အောက်မှာဆိုရင်ကော…”. .. “ငါတို့က ညီအမလိုနေခဲ့တာလေ.တယောက်နဲ့တယောက်မလိမ်ကြေးဟာ..” သူမတို့ခံစားချက်များရင်ဖွင့်ကြလေသည်….
သူမတို့ဒါမျိုးမနေဖူးပေ.. ထိုအခါ မစ်လီက.. “ဟေး..ဘေဘီတို့..ဒီတိုက်ခန်းမလိုချင်ဘူးလား..ခ်ခ်..”. . သူမတို့လိုချင်ပါသည်… ဆရာကပေးမယ်ဆိုရင်ပေါ့… “ဆရာဘယ်မှာအိပ်မှာလည်း”. . ဆရာမြ မစ်လီနှင့်အိပ်ရန် မသင့်တော်ပေ. တိုက်ခန်းမှာသုံးခန်းရှိသော်လည်း.. အိပ်ယာခင်း က မပြည့်စုံပေ.. ထို့ကြောင့်.. “အပြင်မှာအိပ်မယ်လေ..ဟိုတယ်လည်း မအိပ်ချင်ဘူး..သောက်ပီးရင်ဘယ်မှမသွားချင်ဘူး” မနက်ဖြန်မှ အိပ်ယာထပ်ဝယ်ရမှာ… ထိုအခါ ဇင်ဇင်က.. “သမီးတို့အခန်းက ကုတင်မှာအိပ်လေ.. သမီးတို့အောက်မှာအိပ်မယ်”. . “အေးပါ ဒီတညတော့ အဆင်ပြေသလိုပေါ့…”. ….. စကားတပြောပြောသောက်ကြရာ.. အားလုံး ဘီယာ မူးလာကြသည်… မစ်လီ အခန်းထဲဝင်အိပ်လေသည်.. ခင်လေးနဲ့ဇင်ဇင်က မအိပ်နိုင်ပါ.. သူတို့လည်းအခန်းဝင်ကြလေသည်.. “ဆရာရီးစားရှိလားဟင်..” “မရှိပါဘူးဟာ..ဒါပေမဲ့ချစ်မိတာတော့ရှိတယ်”. . “ပြောပြ..”. . “မပြောဘူး”. .. ကြမ်းပြင်တွင်အိပ်ယာအထူခင်းလှဲအိပ်ကြခြင်းဖြစ်သည်..ကုတင်ထက်က ဆရာမြကို ဇင်ဇင် လှမ်းရစ်နေသည်.. ခင်လေးကတဖက်လှည့်၍.အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေသည်…
ဆရာမြ နမ်းတာ ခံထားရသောသူမတို့. ဘဝင်မကျဖြစ်နေသည်.. ဇင်ဇင်စိတ်မရှည်တော့ပါ.. ကုတင်ပေါ်တက်ပီး..ဆရာမြဘေးတွင်ထိုင်မေးလေသည်… သူမ ကိုဆွဲလှဲလိုက်ပီး… “သိချင်ရင် ပြောပြမယ်..လာခဲ့”ဟုဆိုကာ ဖက်၍လှဲချပီး ကစ်ဆင်ရိုက်လေတော့သည်… သူမ မျော့သွားလေသည်..အင်းကျီအပါးလေးကိုဆွဲလှန်လိုက်ပီး… “ရှူး…..”. ဆရာမြ တိတ်နေရန်လုပ်ပြသည်.. ခင်လေးအိပ်နေသည်ထင်မိလို့ဖြစ်သည်. ဇင်ဇင် ရင်ခုန်သံဆူနေပီး… “ဆရာသမီးကိုချစ်တာလားဟင်”. . “အင်းပေါ့ကွယ်.”. . လက်တအုပ်စာနို့သားလေးများကို… ဖွဖွလေးပွတ်ပီး နို့သီးပန်းရောင်လေးကို ခလေးနို့စို့သလိုစို့လေသည်… မျက်လုံးမှေးမှေးလေးနှင့်နှာတံချွန်လေးကအစ လျှာနဲ့လိုက်ယက်ပေးလိုက်သည်.
ဆရာမြလီးကြီးမှာ ထွက်ရန်တာဆူနေ၍ အဝတ်များချွတ်ရလေသည်… အပျိုလေးမို့ချက်ချင်းလိုးလို့မပါ.. နှူးနှပ်ရပေမည်… နှုတ်ခမ်းပါလေးကိုကစ်ဆင်ရိုက်လျှာနှင့်ထိုးမွှေရလေသည်..သူမလက်တခုကိုယူပီး လီးပေါ်တင်ပေးလိုက်သည်… ဇင်ဇင်မညံ့ပါ သူမငယ်စဉ်ကမိဘများလိုးကြတာမြင်ဖူးသည်..မိခင်က ဖခင်လီးကို ကိုင်ပီး ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်ရင်း ငုံတာမြင်ဖူး၍ မှတ်မိနေခဲ့သည်… ယခုဆရာလီးကို ကိုင်ပီး လုပ်ပေးနေမိသည်… သူမကြိတ်ကြွေနေသောသူ၏ လီးကို ကိုင်ခွင့်ရတာ ကံကောင်းလှပေသည်… ဆရာမြလက်များသူမဘောင်းဘီကိုချွတ်နေတာသိ၍ ဖင့်ကြွပေးလိုက်သည်… လစ်ဟာသွားသောသူမ ပိပိလေးကို.. ပွတ်သပ်ပေးပြီး အတွင်းသို့ လက်ချောင်းလေးတိုးဝင်လာ၍.. အရသာရှိလှသည်… သူမအသံမထွက်နိုင်ပါ.ခင်လေးသိမှာစိုးသလိုဆရာကနှုတ်ခမ်းခြင်းတေ့ထားလို့ဖြစ်သည်… အပျိုမလေးမို့ဘာဂျာပေးသင့်သည်ဟု ဆရာမြတွေးမိသည်..
နို့နှင့်ဗိုက်သား ချက် အထိ လျှာကြမ်းကြီးနှင့်ဆက်တိုက်ပွတ်လာခဲ့သည်… ဆီးခုံအမွှေးနုလေးများကိုပါ မကျန်အောင်နမ်းပြစ်လိုက်သည်… တွေ့ပါပီ ပေါင်လေးနှစ်ခုကြားဝပ်နေသောပိပိလေးမှာ အရေလေးများပင်စိုနေသည်… အစိလေးကို စုပ်လိုက်ပီး… စိနေသောစပလေးကို လျှာနဲ့ထိုးကာ ဝက်နံရိုးအတွင်းကချင်ဆီစုပ်သလိုပြွစ်ခနဲ စုပ်လိုက်သည်… အဖုတ်အတွင်းသားလေးမှာရဲနေပီး… လိုးဖို့အပေါက်မှာ လက်ညှိုးလောက်သာရှိသည်… ဇင်ဇင်ခါးကော့ပေးရုံမှတပါးဘာမှမလုပ်တတ်ပါ… ထူးခြားသောကာမအရသာက အထွတ်အထိပ်ရောက်နေလေပီ… ဆရာမြ လီးကို တမ်းတမိနေသည်… ဆရာက ၆၉ ပုံစံမှောက်ပေးလိုက်သည်.. ပထမဆုံး အတွေ့အကြုံမို့သူမ နားမလည်ပေ..ထို့ကြောင့်ဆရာက.. လီးကိုပါးစပ်ဝတေ့လေသည်..
သူမ ဟပေးလိုက်သည်…မျက်စိအရှေ့မှာကြီးမားသောလီးနှင့်လဥက ခါယမ်းနေသည်. သူမ စုပ်ချင်လာအောင် ဆရာက စပ ကိုမျက်နှာအပ်ကာ စလျက်ပေးလေသည်.. အ့…အီး….အွင်း… ကြာရှည်မခံပါသူမ အရည်များ စီးထွက်လာသည်… ခင်လေးမအိပ်သေးပါ… ဇင်လေး ကုတင်ပေါ်တက်သွားတာကြာလေပီ… ငြီးသံလေးကြားမိ၍ အသာလှည့်ကြည့်လိုက်သည်.. သူမရဲ့ ဆန်ကျင်ဘက် ကုတင်စွန်းနားမှာ အပြန်အလှန်ယက်စုပ်နေကြတာမြင်ရ၍ ရင်တွေတုန်လာသည်… ဇင်ဇင်တယောက်ထဲဆရာကိုသိမ်းပိုက်နေတာ မနာလိုတော့ပေ… ထိုစဉ်ဆရာမြက ခင်လေးဘက် ​ခြေဆင်းကာပက်လက်လှန်လိုက်ပီး ဇင်လေးကို မျက်နှာပေါ်မတင်ကာ စပကို ယက်နေပြန်သည်… အဝတ်အစားမဲ့ကာ ခေါင်းမော့ ခံနေသော ဇင်လေးကြောကို မြင်နေရသည်… အဆင်းလှသော ဇင်လေးကိုဆရာကြိုက်သွားမှာမလိုလားပေ…. ခင်လေးအရှေ့မှာ လီးကြီးကထောင်မတ်နေသည်.. ၇လက်မလောက်ရှိမည် ဓာတ်ခဲအကြီးလို လုံးဝင်းပြောင်လက်နေသည်… ဘီယာတခိုးက မပြေသေးပါ..ရဲဆေးကျန်သေးသည်.. ထို့ကြောင့် လီးကိုလှမ်းကိုင်ကြည့်ပီး… အထက်အောက်ဆွဲကြည့်လေသည်…
ဆရာမြ တွန့်သွားရသည်..လီးကိုဘသူကိုင်လဲလှမ်းကြည့်သည်..ခင်လေးဖြစ်နေ၍မသိသလို နေလိုက်သည်… လီးနွေးနွေးကြီးနားကပ်ကြည့်ပီး..ရှူကြည့်လေသည်… လီးနံ့သင်းသင်းက ကာမစိတ်ထလာစေသည်… သူမ နို့ကိုပွတ်ကြည့်သလို စပကိုလဲနှိုက်သည်…အရမ်းကောင်းလှ၍ မထူးတော့ပါ.. လီးကိုကြည့်ပီးစပကိုပွတ်လေတော့သည်…ဆရာမြ လိုးမှရတော့မည်..ထို့ကြောင့် ထထိုင်လိုက်ပီး..ဇင်လေးကိုပက်လပ်ပေါင်းကားလုပ်ကာလီးမှာတံတွေးစွပ်၍..အဖုတ်ဝဖိချလိုက်သည်… ဒစ်ကြီးမဝင်၍ ထပ်ဖိရလေသည်… ဗြိ ဒုတ် အွင်း အ့….တဝက်ဝင်သွား၍ သွေးထွက်လာသည်..အမှေးကွဲသွားသည် ..ဇင်လေးနာလွန်း၍မျက်ရည်ပါကျသည် ..ဆက်တိုက်လိုးအားကြောင့်ဖင်လေးမှာ အိခနဲအိခနဲ..ပြားသွားရသည်… ဆရာမြ ဒိုက်ထိုးသည့်ပုံစံပြောင်းကာ.. အလွတ်ဝုန်းပါတော့သည်.. ဇင်လေးပေါင်ထောင်ပီး..ခေါင်းရင်းကုတင်ဘောင်ကို လက်ထောက်ကာ ကော့ခံလေတော့သည်….
အား..အား…မရပ်ပါနဲ့…အား… နာသေးလား ဇင်… မနာဘူး.. မရပ်နဲ့.. အ့အ့…အား…. သူမ လက်များဆရာမြလက်မောင်းကို ဆွဲညစ်ကာ…ကော့ကော့ပီး ထပ်ပီးလေသည်… ဆရာကတော့မရပ်မနား လိုးကောင်းဆဲပါ တအိအိကျွံဝင်နေသော စပ ဘေးသားများကို ကြည့်ရသည်မှာအရသာရှိလှသည်… ထို့နောက်လီးကိုဆွဲထုတ်ပီး…သူမ ဗိုက်ပေါ်မှာတင်ကာ ဂွင်းထုရင်း သုတ်များထုတ်လိုက်လေတော့သည်.. ….ထို့နောက်တစ်ရှူးထုတ်ယူကာသုတ်ပေးပီး..ကောင်းလား ဇင်လေး… “အင်း..ဆရာ ကျမကို ပစ်မသွားနဲ့နော်” “ပစ်စရာလား ကလေးရယ်..အိပ်တော့”. ….နှစ်ဦးသားအဝတ်များပြန်ဝတ်၍ ဇင်လေး က ခင်လေးနားမှာပြန်အိပ်ကာ ဆရာက အခန်းပြင်ထွက်သွားလေသည်. …
ခင်လေး..ပေါင်ကြားမှာလက်ထဲ့ထားရသည်..အရေများထွက်နေ၍ဖြစ်သည်.. သူတို့အခန်းတွင် ရေချိုးခန်းမရှိပါ.. ထို့ကြောင့် ယခုမှနိုးသလိုဟန်ဆောင်ကာ. “အင်း…သေးပေါက်ချင်လိုက်တာ”. .. “ခင်လေး နင် အိပ်နေတာလား..” “ဟုတ်တယ်..ခြေသံကြားလို့နိုးတာ.. နင်မအိပ်ဘူးလား..”. . “အင်း ပူနေလို့ ခုအိပ်တော့မယ်”. .. ကမရယ် ညာစရာလားငါနားလည်ပါတယ် ဆရာကငါ့ကိုလည်းချစ်မှာပါ.. ခင်လေးစိတိထဲပြောနေမိသည်… .ထမင်းစားပွဲဘေးတွင် ဆရာမြဘီယာသောက်နေသည်… ခင်လေး ဆရာ့နားသ်ို့သွားပီး… “ဆရာ ကျမကို နဲနဲလေးတောင်လှည့်မကြည့်ဘူးနော်” “ဇင်လေးရှိနေလို့ပါ..သမီးရယ်”. . “ခုကျမ အိပ်လို့မရဘူး”. .သူမခေါင်းလေးငုံ့ပြောလေသည်.. ဆရာမြ စားပွဲခုံကထလိုက်ပီး… ခင်လေးကိုတင်းတင်းလေးဖက်ကာ.. “ဆရာ မင်းတို့နှစ်ယောက်လုံးကို သင်တန်းမှာစတွေ့ကတည်းကချစ်ခဲ့တာ. ပီးတော့မင်းတို့ဆရာ့ကိုစိတ်ဝင်စားနေတာသိလိုက်တယ်”. … “ဆရာတယောက်ထဲကိုချစ်လို့မရဘူးလား”. . “မရဘူး..ဆရာ့အချစ်က မျဉ်းပြိုင်လိုပဲ.. အတူယှဉ်သွားနေတာ..ဒါကြောင့်နှစ်ယောက်လုံးချစ်တယ်”. .ဟုဆိုကာနမ်းလေသည်..
“ခုနကဘာလို့လာကိုင်တာလဲပြော”. . “ဇင်ဇင် ယူသွားမှာကြောက်လို့”. .. “ဟား..ဟား..မင်းလဲပိုင်ပါတယ်ကွာ”. .. ထမင်းစားပွဲပေါ်သူမကိုမတင်လိုက်ပီး.. အနမ်းမိုးရွာလေတော့သည်… ခင်လေးနှင့်ဇင်လေးမှာ ဆိုက်တူဂိုက်တူများဖြစ်သလို..စိတ်ဓာတ်လဲတူကြပီးအသက်လဲတူကြလေသည်… မတူတာရှိသည်..ခင်လေးက..စပညိုသည် ဇင်ဇင်က စပ နီလေသည်… ခင်လေး အချစ်က ဇင်ဇင်ထက်မလျှော့ပါ ဆရာ ရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေကိုပြန်စုပ်ပေးလိုက်သည်.. “ဆရာ့ဟာ ထဲ့တော့လေ..ကျမ..လည်း ကောင်းချင်တယ်..”. . “နာရင်မအော်ရဘူးနော်”. . “အင်း..ထဲ့..ဆရာ့မိန်းမ လုပ်ချင်တယ်” “အိုကေ. .ထဲ့ပီ..”. . စားပွဲဇောင်းမှာပင် သူမကို လိုးရပေမည်. ဆရာမြမျက်နှာကိုခင်လေးစိုက်ကြည့်နေပါသည်..
ဘလိုလိုးမလဲဆိုတဲ့သဘော.. အောက်ပိုင်းအဝတ်များချွတ်ပီးနောက်. ခင်လေးမှအရင်စ၍. ဆရာမြမျက်နှာကိုဆွဲပီး နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်လေသည်.. ဆရာ့ လီးကြီး က ခင်လေးစပစီထိကပ်လာသည်..သွင်းလို့မရပေ.ခုံပေါ်မှာထိုင်နေ၍.ခုံနှင့်စပက ကပ်နေလို့ဖြစ်သည်..ဆရာမြ…စိတ်မရှည်တော့.. “ဒီမှာအဆင်မပြေဘူး ခင်လေး.အိမ်ရှေ့သွားမယ်” ဆရာမြသူမကိုပွေ့ချီလိုက်ပီးအိမ်ရှေ့ဆိုဖာအကြီးရှိရာ သွားလေသည်… ခလေးတယောက်လို ငြိမ်နေသောသူမမျက်နှာလေး အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းနေသည်.. ဆိုဖာအထက် ချလိုက်ပီးနောက်…. “ကုန်းလိုက်သမီး..အနောက်ကလိုးမယ်”. . ဖင်ဘူးတောင်းလေးထောင်ပေးသော သူမ တင်သားဖြူလေးနှစ်ခုကြားထဲ့ခေါင်းထိုးထဲ့၍စအိုနှင့်စပကို ယပ်ပေးလိုက်သည်..
အွင်း…..ဆရာ.. အ့…ယားတယ်… စပ အဝကိုဖြဲပီး လျှာနှင့်အရင်လိုးပေးလိုက်သည်… မန်ကျည်းစိလောက်တောင်နေသောသူမစောက်စိကအရေလေးပင်တွဲလဲခိုနေသည်.. တစ်နေရာယူ နှစ်အဆင့်သင့် သုံးလိုး.. ဆိုသလို လီးကိုအဝတွေ့ပီး စောင့်သွင်းလိုက်သည်… အား…နာ..တယ်…ဆိုဖာခုံကိုတင်းတင်းကြပ်ဆုတ်ကိုင်ပီအော်လေသည်… “မအော်နဲ့လေ..ခုနကပြောတော့မအော်ဘူးဆို..”. . “အွင်း အော်ဘူး…အ့… ကြပ်ထုပ်နေသော စပသေးသေးလေးထဲ တုတ်ရိုက်ထဲ့သလိုဖြစ်နေသည်.. လီးကြော ဖုထစ်များက တဒစ်ဒစ် တိုးဝင်ပီး အမှေးပါကို ထောက်မိသည်.. ဇင်ဇင့်ကိုပါကင်ဖောက်စဉ်က.သိပ်မနာပေ အထူအပါးကွာလို့ဖြစ်သည်.. ခင်လေးမှာစပအညိုဖြစ်၍..အမှေးထူဖြစ်ပုံရသည်…မစ်လီစပကို ပါကင်ဖောက်စဉ်က အရမ်းလွယ်သည်.. တရုတ်မ စပ က ပါးလို့ဖြစ်သည်..
ခင်လေး အမှေးကို ဖောက်ရန်သူမခါးကို ညစ်ကိုင်ပီး..သံရိုက်သလိုခပ်ဆတ်ဆတ် စောင့်လိုးရလေသည်… ဖောက်…ဒုတ်..အား…ဟီး…အမေရေ…. အား…နာတယ်… ရပ်ထားရင်ပိုနာလေမည်..ထို့ကြောင့် သူမခါးကိုဖိလိုက်ပီး တင်သားနှစ်လုံးကို ပေါင်နှင့်ညှက်ကာ ဆက်တိုက်ဝုန်းရလေသည်… ဗြိ..ဗြိ…ဖွတ်..ဖွတ်…အ့….ရှီး…. “ကောင်းလာပီလား..ခင်လေး..အ့”. . အင်မတန်ကောင်းသော အရသာကို ဆရာမြ ခံစားရသည်… “ကောင်းလာပီ…အင်း..အင်း… ပျော့အိနေသော ဆိုဖာကြောင့်သူမဗိုက်သားများမနာပါ. သားအိမ်ကို ထိမိမှ နာ၍ ထအော်လေသည်…
ထို့ကြောင့်လီးတဆုံးမလိုးပဲ.. တဝက်လိုးလုပ်ရလေသည်…ဘွတ်..ဘွတ် အွင်း..ဆရာ..အား…သူမအရေများဆိုဖာပေါ်စီးကျလာကာ ငြိမ်သွားလေသည်… ဆရာမြမပီးသေးသောလီးကိုချွတ်လိုက်ပီး “အခန်းထဲသွားရအောင်နော်..သွေးလဲထွက်နေတယ်. .ရေဆေးရမယ်”. .. “ကွဲသွားတာလားဟင်..” “မကွဲဘူး အစပိုင်းမို့ ပါနောက်ဆိုမထွက်တော့ဘူး”. .. ဆိုဖာပေါ်မှအရေများကိုသုတ်လိုက်ပီး နှစ်ယောက်သားရေဆေးကာ အိပ်ခန်းဝင်လေတော့သည်..
……ဆရာမြ..ဇင်လေးနှင့်ခင်လေး နှစ်ယောက်ကြားဝင်အိပ်ရင်းလောကစည်းစိမ်ခံစားနေ၍ .တဖက်ခန်းမှမစ်လီကိုမေ့သွားလေသည်… အသစ်စက်စက်ချစ်သူနှစ်ယောက်ကဖက်ထားပြန်၍.. ငပဲထောင်နေသည်.. ဆရာမြသည်သူမတို့နှစ်ယောက်မိဘများကို မမြင်ဖူးပေ အတွင်းရေးမှူးမ မအိချောသာ သိလေသည်.. ထို့ကြောင့်… “သဲလေးတို့မိဘတွေပုံပြပါလားမြင်ဖူးရအောင်”. . ထိုအခါမှ သူမတို့ဖုန်းများထုတ်ကာ.. ပုံများပြကြလေသည်.. ဇင်လေးမိဘများကိုမြင်ရ၍သိပ်မထူးဆန်းသော်လည်း.. ခင်လေးအမေပုံကိုမြင်ရသောအခါ..စိတ်လှုပ်ရှားရလေပီ… ..”ခင်လေး အဖေရော မတွေ့ပါလား”. . ထိုအခါခင်လေးက..စိတ်မကောင်းစွာဖြင့် .”သမီးမှာ အဖေမရှိဘူး မွေးပီးထဲကမမြင်ဖူးတာ”. . “အို..ခင်လေးရယ်.သနားစရာ”. . ထိုအခါဇင်လေးက.. “ဟုတ်တယ် ဆရာ..အန်တီခင်ကိုမေးဖူးတယ်.. ဘာမှမပြောဘူး”. .. ဆရာမြ ကြေကွဲပီလေ..ခင်မမ နှင့် ဆရာမြမှာရီးစားဟောင်းများဖြစ်ကြသည်… “ဆရာမြန်မာပြည်ပြန်ရင်လက်ဆောင်တွေပေးလိုက်ကြ..ဟုလား..သွားပို့ပေမယ်” “ယေး…..ချစ်လိုက်တာ ဆရာရယ်”. .. သူမတို့နှစ်ယောက် ပျော်ရွှင်စွာဖြင့် အိပ်ကြလေသည်…
တပါတ်ဆိုတာခဏလေးပါ… စလုံးအနှံ့ လည်ပတ်ပီးနောက်.. ခင်လေးနှင့်ဇင်လေးအတွက်လိုအပ်သမျှ စီစဉ်ပေးပီး မစ်လီနှင့်အပ်ကာ.. ဆရာမြ မြန်မာပြည်သို့ပြန်ရလေသည်… …ဆရာမြ၏ သင်ကြားပြသမှုနှင့်ပညာတော်သင်လွှတ်ပေးမှုက လွန်စွာနာမည်ကြီးလာ၍ သင်တန်းသားများ တိုးပွားလာလေသည်. အတွင်းရေးမှူးမ မအိချောလည်းအလွန်အလုပ်ရှုပ်လာပီး.. စာရေးမအသစ်တယောက်ပါထပ်ခန့်ထားရလေသည်… ..ဆရာမြပြန်ရောက်၍မအိ အရမ်းပျော်နေသည်..သူမလင်ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းမပူရတော့ပေ.. ဆရာမြကောင်းမှုကြောင့်လူနာစောင့်နှင့်အထူး နာစ်ရရှိကာ..မအိလည်း အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ပေပြီ.. ..”ကိုမြ..ကျမစာရေးမအသစ်ခန့်ထားတယ်နော်..ဟွင်း..ဟွင်း..ရာထူးတိုးပေးဖို့မကြံနဲ့” .နှစ်ယောက်ခြင်းတွေ့ချိန်မှာမအိကစနောက်သဖြင့်.. “ဟာ..အိကလည်း..အိရှိရင်..ပြည့်စုံနေပါပီ.. ဘာလဲဘွတ်မှာစိုးလို့လား..ဟားဟား”. …. ဆရာမြ အဘွတ်ခဏရပ်ထားရသည်.. စလုံးမှာလည်း သုံးယောက်ရှိသလို.. မအိကလည်းရှိသေးသည်..ဘွတ်ပေါက်များနေ၍ စိတ်ထိန်းမှရပေမည်.. …”မအိရေ..ဇင်လေး မိဘတွေအတွက်လက်ဆောင်ပါလာတယ် အဲ့တာ သွားပေးလိုက်ပါ”. . “ကျနော်က ခင်လေးမွန်အိမ်သွားလိုက်မယ်. ပြောစရာတွေရှိသေးလို့”. .. ……. …ဆရာမြ.. ခင်းလေးမွန် အိမ်ရှိရာထွက်ခဲ့သည်.လက်ဆောင်ပစ္စည်းများကိုကိုင်ပီး.အိမ်ရှေ့တွင်ရပ်ကာ.. “အိမ်ရှင်တို့..ရှိကြလား”. .. ထိုစဉ်အမျိုးသမီးတယောက်ထွက်လာလေသည်..
သူမ တံခါးဝမှာတင်ခြေစုံရပ်တန့်သွားသည်.. မမျှော်လင့်ထားသောသူရောက်ရှိလာ၍. ငိုမလိုရီမလိုဖြစ်နေသည်… “ခင်မမ..င့ကိုမသိတော့ဘူးလား”. . “သိတာပေါ့ မြနိုင်ရယ် ငါမမေ့ပါဘူး”. . “ငါဝင်လာမယ်နော်”. .. သမီးဖြစ်သူ၏ကျေးဇူးရှင်ဆရာဖြစ်နေ၍ ငြင်းလို့မရပေ..သူမခပ်တည်တည်နှင့်.. “လာပါ..ငါက အဆင့်မခွဲပါဘူး”. .. ခပ်ရွဲ့ရွဲ့ပြောလေသည်… အိမ်ဧည့်ခန်းခုံတွင်ထိုင်လိုက်ကြပီး.. ဆရာမြက… “ခင်မမ ဒါတွေက နင့်သမီးလက်ဆောင် ပေးလိုက်တာပါ..” အထုတ်များပေးလိုက်လေသည်.. ထို့နောက်..ခင်မမက.. “မြနိုင် နင့်မိဘတွေရော ရှိသေးလား”. “ဆုံးသွားပါပီ..နင်ပူစရာမလိုပါဘူး”. . “င့သမီး အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သူဖုန်းဆက်တယ် နင်က သမီးအပေါ်အရမ်းကောင်းတယ်တဲ့.. ငါကျေနပ်ပါတယ်”. .. “ခင်မမ..နင်ဘာလို့င့ကိုမဆက်သွယ်ခဲ့တာလဲ”. . “ငါဘလိုဆက်သွယ်မှာလည်းနင့်မိဘတွေကင့ကို အဆင့်ခွဲပီးနှင်ထုတ်ကြတယ်လေ” …..ဆရာမြ မိဘများမှာလွန်စွာချမ်းသာကြသည်.. ၁၈နှစ်အရွယ်မှာမြနိုင်နှင့်ခင်မမတို့ချစ်ကြိုက်ကြသည်..မြနိုင်ဆေးမူးအရက်မူးပီးလျှင် ခင်မမကိုခေါ်ကာ ဘွတ်တတ်သည်.. ခင်မမ သည် ငယ်စဉ်က အချောအလှတယောက်ဖြစ်သည်..
လုံးကြီးပေါက်လှလူတိုင်းကြိုက်သည့် ငှက်ပျောခိုင်ကြီးဖြစ်သည်..သို့သော်မြနိုင်တို့နှင့်ယှဉ်လိုက်လျှင် ဘဝကမိုးနဲ့မြေလို ကွာခြားသည်..ထို့ကြောင့်မြနိုင်မိဘများက သဘောမတူပဲ ခွဲကြပီး မြနိုင်ကို အင်ဂလန်ပို့လိုက်ကြလေသည်… ..”ငါ့အမှားတွေပါ ခင်မ ရယ် ငါမပြတ်သားခဲ့တာပါ”. . ခင်မမ ငိုလေတော့သည်.. “မြနိုင် နင့်ကြောင့် င့ မိဘတွေစိတ်ဆင်းရဲပီး ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်ဆုံးသွားကြတယ်.. ငါလဲ ဘဝပျက်ခဲ့တယ်..နင်သိလား… အီး…ဟီး..ဟီး”. .. “တိတ်ပါဟာ.နင့်ယောက်ျားကဘယ်ရောက်နေလဲ”. .. “ဘာယောက်ျားလဲ နင့်ကြောင့်ဗိုက်ကြီးလို့ ဘသူမှ င့ကို လက်မခံဘူး..ငါတို့တွေအိမ် ပြောင်းပီး ဒီမှာနေကြတာသိလား”. . “ဟင်…ဒါ..ဒါဆို ခင်လေး က..”. . “ဟဲ့..အဲ့တာ..နင့်သမီး အရင်းခေါက်ခေါက်ပဲ..”. .. “ဟာ..နင်..နင်..ညာနေတာလာ..ခင်မ” ဆရာမြ ခေါင်းတခုလုံးချာချာလည်နေပီ ခင်လေး မျက်နှာကိုခုမှ ပြန်မြင်ယောင်မိလေသည်.. ဆရာမြနဲ့ရုပ်ဆင်တယ်ဟု..မအိပြောဖူးတာ ခုမှသတိရတော့သည်…
“နင်မယုံဘူးလား.မယုံရင် ဒီအမ်အေ သွေးး စစ်ကြည့်လေ..နင့်သွေးက အို မှတ်လား. နင့်သမီးလဲ အို သွေးပဲ..”. .. ခင်မမ မြနိုင်၏ မွေးနေ့နှင့်သွေးအုပ်စုကအစအကုန်မှတ်မိနေသေးသည်.. မြနိုင် ခေါင်းငိုက်စိုက်ကြပီးနောက်.. “ခင်မ ရယ် နင်ဘာလို့ သူတို့စလုံးမသွားခင်ငါနဲ့မတွေ့ခဲ့တာလဲဟာ”. … “နင့်ရုပ်ကိုမမြင်ချင်လို့လေ”. .. ဆရာမြတယောက်သမီးကိုလိုးမိခဲ့လေပီ ပြင်လို့မရသောအမှားကြောင့်စိတ်ထိခိုက်မိလေသည်..ခင်မမ ကိုထိုအကြောင်းပြောလို့မဖြစ်ပေ.. ထသက်နေလိမ့်မည်…
ထို့ကြောင့် ခင်မမ ဘေးမှထိုင်လိုက်ပီး ပုခုံးလေးကိုဖက်ကာ.. “မငိုပါနဲ့တော့ဟာ..ငါအခု င့အပြစ်တွေကိုပြန်ပေးဆပ်ပ့မယ်နော်”. . ငိုနေသောခင်မမျက်ရည်လေးများကိုသုပ်ပေးလိုက်သည်.. ခင်မမသည် စိုးမြတ်သူဇာနှင့်တူလေသည် ယခုချိန်ထိ လှတုန်းကိတ်တုန်းဖြစ်သည်.. “သူမပါးလေးကို လှမ်းမွလိုက်သည်.. “ငါတို့ပြန်ပေါင်းကျမလားဟင်..ခင်မ”. . “ဒီအရွယ်ကြီးရောက်မှ ငါမပေါင်းချင်တော့ဘူးမြနိုင်..နင့်သမီးကိုသာ ကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်ပါ”. . “အေးပါ..နင့်သဘောပါ ခင်မရယ်”. .. ခင်မမရဲ့ကိုယ်လုံးလေးကို သူ့ဘက်ဆွဲလှဲ့လိုက်ပီး..နှုတ်ခမ်းခြင်း ကစ်ဆင်ရိုက်လိုက်သည်.. “ငါခုထိနင့်ကိုချစ်ဆဲပါခင်မရယ်.”. . သူမ မတော်ခဲ့ရသောလင်ရဲ့ဘွတ်ကွက်များကို ကစ်ဆင်ရိုက်ရင်းသတိရလာသည်…
“မြနိုင် အသက်ကြီးပီလေ..ပီးတော့အိမ်ရှေ့မှာ မသင့်တော်ဘူး..နင်ပြန်ပါတော့ဟာ”. . ခင်မမ အသက်၄၀ သာရှိသေးသည်.. မကြီးသေးပါ..အလှအပ မလုပ်၍. ကြီးသလိုဖြစ်နေသည်.. ..”ငါတို့အသက်တူပဲလေ မကြီးပါဘူးဟ. အိမ်ရှေ့မှာမသင့်တော်ရင်..အခန်းထဲသွားမယ်..လာခဲ့”. .. ခင်မမ နှစ်၂၀ လောက်လီးငတ်ခဲ့ရသည်.. ချစ်သူက လိုးပီးနားမလည်ထားခဲ့ပေမဲ့.. မိမိစပကို မည်သူ့ကိုမျှမကျွေးခဲ့ပါ.. စိတ်ထလာတိုင်း ခေါင်းအုံးနှင့်ပွတ်ကာ.. ကာမစိတ်ဖြေခဲ့ရသည်.. ခုတော့ ပျောက်ဆုံးနေသောလီးက.. လက်တကမ်းမှာ ရှိနေသည်… မငြင်းချင်တော့ပါ…ထို့ကြောင့်အိပ်ခန်းထဲဝင်ကြလေသည်.. ကုတင်မရှိသော အခန်းမှာ တခါမှမလိုးဖူးကြသော စပသငယ်လီးသငယ်လိုမတ်တပ်ရပ်နေကြသည်..
မြနိုင် စမှဖြစ်ပေမည်.. ခင်မ၏ အဝတ်များကို တခုခြင်းချွတ်ချလေသည်… နို့သားကြီးများမှာ အယ်ထွက်လာ၍.. ခင်မက လက်နှင့်ကွယ်လိုက်လေသည်.. ထိုစဉ် အောက်ပိုင်းအဝတ်ကင်းလွှတ်သွား၍.. အမွှေးမဲမဲများဖုံးနေသော စပကို လက်နှင့်အုပ်ရပြန်သည်… “ခင်မ နင်ငယ်ငယ်က အမွှေးရိပ်တယ်လေ ခု ဘာလို့မရိတ်တာလဲ…” “ဟဲ့..င့စပ သနေရအောင် ဘသူနဲ့မှမခံဘူး သိလား.အဲ့စပက နင်ပဲလုပ်ခဲ့တာ..နင်မလုပ်ချင်ရင်နေလေ” “ခင် ကလဲကွာ မောင်ကစတာပါ.”. . ဆရာမြ သွားဖြဲပြပီး..အဖုတ်ကိုနမ်းလေသည်.. ထို့နောက် ခင်မကို အိပ်ယာခင်းပေါ်လှဲချလိုက်သည်… ခင်မ ၏ နို့သားအိအိကြီးနှင့် ဖြူဖြူဖွေးဖွေး အဆီတက်နေသော ဗိုက်ခေါက်သားကို လိုက်နမ်းလေသည်. ခင်မမ မြနိုင်၏ လိုးကွက်များကိုအလွတ်ရနေသည်..
ငယ်စဉ်ကအကြိမ်ကြိမ်မြနိုင်လိုးတာခံရသဖြင့်…ယခု မြနိုင် ဘာဂျာမှုတ် စပယက်မှာသိနေသည်.ထို့ကြောင့်အလိုက်သင့်ပေါင်ဖြဲပေးလိုက်သည်…လျှာကြမ်းကြီးကအဖုတ်ထဲတိုးဝင်လာပီး.. အစိကိုပါ ငုံစို့လေသည်….အင်း…ဟား…အ့…အ့…. လျှာငတ်နေသောစပ တံတွေးနှင့်အရေများရောကာ ပြောင်လက်နေသည်.. “မြနိုင်လိုးတော့ဟာ..အရမ်းယားနေပီ”. . “ခင့် သဘောဟုဆိုကာ အဝတ်များချွတ်လေတော့သည်… “ဟင်..နင့်ဟာ ကကြီးလာပါလား..ဘာလုပ်ထားတာလဲ” “အသက်ကြီးလို့ လီးကြီးတာပါခင်ရယ်” ထောင်ထားသောပေါင်နှစ်ခုကြားဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ကာ..လီးကြီးထိုးထဲ့ပါတော့သည်… ပြွစ်..ဘွတ်..ဘွတ်…အင်း…အား..ရှီး… “ကောင်းလား ခင် လီးကြီးတာ ကောင်းလား”. .. “အင်း..လိုးပါ..မရပ်နဲ့..” သူမ နို့များခါရမ်းနေ၍ ထိန်းပေလိုက်ပီး အချက်၅၀ခန့်စောင့်လေသည်…
ထို့နောက်ကုန်းခိုင်းလိုက်ရာ… လုံးဝန် လှပသော ဖင်သားဖြူဖြူကြီးပေါ်လာသည်… အဆီတက်နေသောစပဖြစ်၍သာမန် လိုးရုံနှင့်မပီးနိုင်ပေ..ထိုကြောင့် သူမဖင်ပေါ်ခွရပ်ကာ လှံမြေစိုက်လိုးကွက်နှင့် အသားကုန်ဝုန်ရလေသည်… ဘွတ်..ဘွတ်..ဘွတ်…စပအတွင်းမှလေများ ကန်ထွက်လာသည်… အင်မတန်ကောင်းမှမြည်သောအသံဖြစ်သည်…. “မြန်မြန်လိုးပါဟ…မရပ်နဲ့ မရပ်နဲ့..အ့အ့… သူမ ခေါင်းအုံးကိုဆွဲညစ်ရင်း အရေဖြူများထွက်လေသည်… မိန်းမများပီးနေချိန်အလိုးရပ်လို့မရပါ.. ဆက်တိုက်လိုးပေးမှကာမနိဗ္ဗာန်တက်နိုင်လေသည်…ထို့ကြောင့်ဆရာမြ ထပ်မံ၍ အချက်၂၀ခန့်လိုးပီးမှသုတ်ရည်များပန်းထွက်သွားလေသည်…
“ခင်မရယ် နင်ကအရင်လို လိုးလို့ကောင်းတုန်းပဲ..”. . “နင်လဲအရင်က လီးသေးသေးလေးနဲ့လေ ခုတော့အကြီးကြီးဆိုတော့ခံလို့ပိုကောင်းလာတယ်”. … ထိုစဉ် မအိရဲ့ဖုန်းဝင်လာသည်. “”ကိုမြရေ..နောက်တနာရီ သင်တန်းစမှာနော် အဲ့တာသတိပေးတာ”. . “ကိုယ် စာသင်ပေးရအူးမယ် ခင်မ. နောက်နေ့ထပ်လာမယ်နော်”. . “အွင်း..သမီးကို ဂရုစိုက်ပါနော်..သမီးက သနားစရာလေးပါကိုမြ..အဖေမရှိပဲဘဝကို ဖြတ်သန်းရင်းကြိုးစားနေရတာ”. “ငါနားလည်ပါတယ် ခင်မ.. သွားလိုက်အူးမယ်”. . ထိုညတွင် စလုံးရှိ တိတ်တိတ်ပုန်းချစ်သူနှင့် မယားပေါက်စ ဆီဖုန်းဆက်ရလေတော့သည်… ..”ဆရာလကုန်ရင်ပြန်လာမယ်နော်သမီးတို့..စာကြိုးစားကြနော်”. .. ….. နှစ်အနည်းငယ်ကြာပီးနောက်.. ခင်လေးနှင့်ဇင်လေး တို့ နိုင်ငံခြားမှဘွဲ့များယူကာ ပြန်လာကြလေသည်…. ထို့နောက် ဆရာမြက ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဖွင့်လှစ်ပေးပီး… သူတို့နှစ်ယောက်အားအပိုင်ပေးလိုက်လေသည်…. မအိချောမှာ ဆရာမြ၏ ထာဝရအတွင်းရေမှူးဖြစ်လာကာ.. ဒေါ်ခင်မမက တိတ်တိတ်ပုန်မယား..သို့မဟုတ်.. ဆရာမြ၏ ထာဝရချစ်သူဖြစ်ခဲ့လေတော့သည်….။ ……ပြီးပါပြီ။။ ခရပ်ဒစ် ရွှေကြာမြိုင်..